Muxuu yahay ujeedka Safarka Abiy Ahmed uu ku tagayo Kenya? | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Muxuu yahay ujeedka Safarka Abiy Ahmed uu ku tagayo Kenya?
Muxuu yahay ujeedka Safarka Abiy Ahmed uu ku tagayo Kenya?
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa berri oo Arbaco ah kuna beegan 9-da December 2020 Kenya ku tagaya safar qorshihiisu yahay labo cishe sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiin katirsan Xukuumadaha Addis Ababa & Nairobi.
Afhayeenad u hadashay Aqalka hoose ee Kenya oo lagu magacaabo Kaze Dena ayaa sheegtay in Abiy Ahmed & xubnaha ku wehliya Safarkiisa ayaa tagaya Marka ay tagaan Moyale waxa ay uga gudbayaan Marsabit.
Waxa uu sidoo kale wafdiga Abiy Ahmed tagayaa meelaha dhaqanka Nairobi, waxaana diyaaradda uu ka raaco Addis Ababa ay caga dhiganeysaa Jomo Kenyatta International Airport oo ay kusii sugayaan madaxda sare ee dalkaas.
Ujeedka safarka ayaa ah in sidii uu xariiga uga jari lahaa dhulka dhaca xuduudda Kenya & Ethiopia oo cabbir ahaan gaaraya 861 KM oo isku xiraya Marsabit, Turkana, Wajeer & Mandheera.
Warbaahinta ayaa hadal heysa in Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Madaxweynaha uu martida u noqanayo ee Kenya marka ay kulmaan in ay kawada hadlayaan xaaladda Geeska Afrika gaar ahaan tan labada dowladood.
Warar kale ayaa sheegaya in xitaa ay isku soo hadal qaadayaan arrimaha Soomaaliya oo ay xad la wadaagaan labadaan Dowladood, Ciidamo ka socda Kenya & Ethiopia oo qayb ka ah AMISOM & xiriirka Xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi oo aan wanaagsaneeen, inkasta oo aysan ka hadlin arrintaas labada madaxtooyo.
Previous articleSomali president vows to hold free, credible elections
Next articleAragti kala fogaanta Doorashada DFS & Musharixiinta.